သိန္း 300 မွ သိန္း 600 ထိ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
#၅၂ရပ်ကွက် #ကျောင်းလမ်း ပေအကျယ် (၅၀x၆၀) ပါမစ် အရောင်း
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9996407 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မဂ်လာပါရှင့်..🙏🙏 မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ တိုက်ခန်းလေးကိုတင်ပေးမှာပါ.
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9987440 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
၃၂ရပ်ကွက် ဦးကြင်ဥလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသစ် ရောင်းမည်.
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9982679 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
#မြောက်ဒဂုံ #50ရပ်ကွက်ရာဇသကြ ်န်လမ်းနီး #မြောက်လှည့်အိမ်အမှတ်ပေါင်းချင်း၉ #မြေကွက် #အရောင်းလေး...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9978476 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မူရင်းခြမ်းရှာနေတဲ့ အမျိူးတွေအတွက် လမ်းမနဲ့အနီး ပေ၂၀ အိမ်အပါအရောင်းလေး အကျိုးဆောင်ပေးပါမယ်ရှင့်။...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9971750 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ဘုရင့်နောင်လမ်းမဒဲ့ဆင်း ​မြေညီထပ် ရောင်းမည်.
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9968644 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မြောက်ဒဂုံ၊ (51)ရပ်ကွက် (20 x 60) PT2 ( ပါမစ်) ရောင်းမည်။
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9961450 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
32 W တိုက်ခန်း အသစ် ရောင်းမည်.
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9958238 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
Location သာတဲ့နေရာလေးက မြေအရောင်းလေးအကျိုးဆောင်ပေးပါမယ်ရှင့်
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9958033 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္